လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်း တွင် ဘယ်လိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများရှိပါသလဲ ? | Office of the Auditor General of the Union
လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်း တွင် ဘယ်လိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများရှိပါသလဲ ?
- လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်းကို (ပထမပိုင်း) တစ်နှစ်၊ (ဒုတိယပိုင်း) တစ်နှစ်၊ စုစုပေါင်းနှစ်နှစ် တက်ရောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းကာလအတွင်း နုတ်ထွက်ပါက လျော်ကြေး ၃၀,၀၀၀ ကျပ် (ကျပ်သုံးသောင်းတိတိ) ပေးလျော်ရန် ကနဦးကတိခံဝန်ကို ကြိုတင်ချုပ်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
- လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်း ပထမ ၅ လပြီးဆုံးချိန်၌ ဘာသာရပ်အသီးသီး တွင် သင်တန်းတက်ရောက်ချိန် ၆၀% ပြည့်မီခြင်းရှိမရှိ တွက်မှာဖြစ်ပြီး ပထမအကြိမ် ၆၀% မပြည့်မီသည့် သင်တန်းသားများအား ကျောင်းမှန်မှန်တက်ရန် သတိပေးစာ ထုတ်ပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်။
- သင်တန်းကာလ ၁၀ လပြီးဆုံးချိန်၌ ဘာသာရပ်အသီးသီးတွင် သင်တန်းတက်ရောက်ချိန် ၆၀% ပြည့်မီခြင်းရှိမရှိ ဒုတိယအကြိမ် ထပ်မံတွက်မှာဖြစ်ပြီး ဒုတိယအကြိမ် (နောက်ဆုံးအကြိမ်) ၆၀% မပြည့်မီသည့် သင်တန်းသားများအား စာမေးပွဲကို ဝင်ရောက် ဖြေဆိုခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။ စာမေးပွဲတစ်ကြိမ် ကျအဖြစ် သတ်မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
- လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်းတွင် သင်တန်းတက်ရောက်ချိန် ၆၀% ပြည့်မီ ခြင်းမရှိသည့်သူများသည် သင်တန်းဆက်လက် တက်ရောက်လိုပါက နောက်ထပ် ကပ်လျက်ရှိသည့်သင်တန်းတွင် သင်တန်းကြေးပေးသွင်း၍ ပြန်လည်တက်ရောက် ရပါမယ်။ ထိုသင်တန်းသို့ တက်ရောက်ခြင်းမပြုပါက နောက်ထပ်စာမေးပွဲတစ်ကြိမ် ကျအဖြစ် သတ်မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
- အပိုင်းတစ်ပိုင်းလျှင် တစ်ဆက်တည်းဖြစ်သော စာမေးပွဲ ၄ ကြိမ်သာ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခွင့် ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
Email : psoffice@e-unionauditor.gov.mm, administration@e-unionauditor.gov.mm, audit@e-unionauditor.gov.mm, itsection@e-unionauditor.gov.mm